TANTARA KELY MAHAFINARITRA
Niakatra fitsaràna ny vehivavy iray satria nanao hadisoana tamin’ny familiana fiara izy.Nanontany azy ny mpitsara :
- Hono ho aho Madama, inona moa no asanao ?
- Mpampianatra aho tompoko!
-Madama e, efa aman-taonany maro no niandrasako mpampianatra hiakatra tribonaly. Ka tsy hianao moa ilay nampianatra ahy fahiny taryAnanona ka nanome punition ahy in-50 isa raha sendra nisy diso ny enti-mody? Mba tratrako kosa ianao izao, Madama, mipetraha hianao, ka ny sazinao dia manoratra (punition) in-500 hoe : « tsy handika lalanan’ny fifamoivoizana intsony aho ».
Tandremo, ny tody tsy misy fa ny atao no miverina
Very tany anaty ranobe ny findain’ity lehilahy anglisy iray., izay lafovidy dia lafovidy tokoa. Andro vitsivitsy tay aoriana, nisy olona niantso izy fa hita ny findainy; Taiza hoy ianareo? Tany anaty trondro antsoina hoe “morrue”, izay azon’ny mpanarato. Rehefa hahandro ilay trondro izy, izay akory nyhatairany nahita an’ity telephone tsara tarehy, tao anaty kibon’ny trondro. Rehefa nohamainina dia nandeha tsara ary ny Numero tao anatiny, izay an’ny tompony no nantsoina ary dia tafaverina soa aman-tsara tany aminy, ity zavatra sarobidy.
ZANAKY NY ZANANY IANAO
Raha handeha hividy zavatra tao amin’ny magazay ity vehivavy iray, no nahita zazalahy kely hanan’ny hatsiaka,mangataka eo am-baravarana. Onena azy ilay Madama ary dia nentiny niditra tao amin’ilay magazay izy ary nividianany akanjo mafàna sy kiraro.
Rehefa nivoaka avy ao amin’ny mpivarotra dia nanontany an’ilay Ramatoa ilay zazalahy:
- Madama a! ianao angaha izany Andriamanitra?
- Tsia an! Zanak’Andriamanitra aho fa tsy Andriamanitra akory!
- Hay, SAMBATRA IANAO, izaho koa mba te ho zanany raha mety!
- Tsy maninona, zanaky ny zanany ianao manomboka androany, dia zanany ihany koa!
Dia noraisiny hipetraka any aminy ilay zazalahy kamboty!
NY TANY EFITRA SY NY VALALA
Tany amin’ny toerana fitokana-monina iray tany an’efitra hono, dia nitaraina tamin’ny lehibe na ny ray aman-drenin’ny tobin’ny mpitoka-monina atao hoe “ Abba” ity zazavao iray:
- Abba o! herintaona izay no nahatongavako teto amin’ny toerana ity, tsy latsaky ny inenina sa impito no efa tonga teto ny valala. Mahatsiraviana sy manorisory! N’aiza n’aiza, feno azy daholo, any amin’ny tranolay, ao anaty bodofotsy, any anaty akanjo… Eny hatrany anaty sakafo aza! Tsy hitako intsony izay atao!
Dia namaky azy ity ray aman-dreny izay efa nipetraka nandritry ny efa-polo taona tany an’efitra:
- Izao anaka an! Tamin’ny voalohany indrindra, tamin’izao vao tonga teto, rehefa nanidina tao anaty lasopiko ny valala iray, dia nariako mbamin’ny lasopy, tamin’ny faharoa nesoriko ny valala ary nohaniko ny lasopy, ary ny fahatelo, nohaniko daholo na ny valala na ny lasopy. Ary amin’izao fotoana izao, raha mitady hitsambikina hiala ao anaty lasopiko ny valala, dia averiko ao indray.
Lesona: mba henoy ihany ny tenin’ny ray aman-dreny sy ny olo-kendry